mardi, 24 septembre 2019 10:11
Gangstabab: Amoaka ny album fahatelo ALBUM FANGADY
Manasa ny mpanao gazety ny kandida ben'ny tanànan'Antananarivo Alban RAKOTOARISOA, fantatra amin'ny anarana artista hoe Gangstabab, fa hivoaka ny alarobia 25 septambra 2019 amin'ny 2 ora tolakandro ny "album" fahatelo: ALBUM FANGADY an'i "Gangstabab". Eo amin'ny fokontany Antsahalovana Antohomadinika Mivondrona no ho avoaka izy io, ary omena maimaimpoana ireo sahirana. Alban RAKOTOARISOA moa dia mitondra ny laharana faha 3 amin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, izay atao ny 27 novambra ho avy izao. Ny antoko APM no nandrotsaka azy.
OVEC Nanisana: Antsapaka amin'ny laharana bileta tokana
Fifidianana Ben’ny tanàna Antananarivo renivohitra: N°1: Ralaiarimanana Elias (Tsy miankina);N°2: Randriamasinoro Tahiry Ny Rina (TIM);N°3: Rakotoarisoa Faniry Alban (APM);N°4: Naina Andriantsitohaina (IRD);N°5: Feno Harison (Tsy miankina). (Jereo Sary Tohiny)
Nivadika ho fifanandrinana mivantana eo amin’ny minisitry ny fitsarana Randrianasolo Jacques sy ny Talen’ny « Bureau des doléances » eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, Rakotomanana Richardson ny tsy fanatanterahana didim-pitsarana mikasika ady tany tao Sambava. Nitarika delegasiona namita iraka mikasika ady tany tao Sambava ny Talen’ny « Bureau des doléances » eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Nisy fihaonana mikaton-trano nifanaovan’ny iraka tamin’ireo nahazo rariny teny amin’ny Fitsarana, mikasika ny ady tany, ny zoma 20 septambra teo. Vahaolana hafa no naroson’ny iraka avy amin’ny Prezidansa fa tsy ny fampiharana didim-pitsarana.
Notanterahina teo amin’ny Place Ritz eto Antsiranana androany 21 septrambra 2019 ny lanonana fametrahana ny samboadin’ireo solombavam-bahoaka voafidy tato amin’ny Faritra DIANA. Miisa enina mianadahy izy ireo no nametrahana samboady maha olom-boafidy, dia ireo roa voafidy teto Antsiranana I, sy iray avy voafidy tao Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja ary Nosy-Be.
vendredi, 20 septembre 2019 12:03
Demande d’avis sur la conformité de la création d’une fondation par le Président de la République
Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019 relatif à une demande d’avis sur la conformité de la création d’une fondation avec l’article 49 de la Constitution. la Haute Cour Constitutionnelle émet l’Avis que : Article premier.- La création d’une fondation par le Président de la République n’est pas contraire à l’article 49 de la Constitution. Article 2.- Le Président de la République ne doit exercer aucune fonction au sein de cette fondation. Article 3.- La fondation doit respecter scrupuleusement son objectif d’intérêt général et doit être dissociée de toute connotation politique. Article 4.- Le présent Avis sera notifié au Président de la République, et publié au Journal officiel de la République.
jeudi, 19 septembre 2019 13:18
Sabotsy Namehana: Nametram-pialana tsy ho Ben'ny Tanàna i Avotraina Andriamosa
Nirotsaka hofidiana ho Ben’ny tanàna eto Sabotsy Namehana, Distrika Antananarivo Avaradrano, amin’ny fifidianana hatao ny 27 novambra 2019 i Avotraina Andriamosa. Ben’ny tanàna amperin’asa ity farany. « Manaja lalàna ny tenako » hoy izy, ka « nametram-pialana tsy ho Ben'ny Tanànan’i Sabotsy Namehana ary nanolotra ny fahefana feno ho an'i Théophile ». Notanterahina ny harivan’ny alarobia 18 septambra 2019 ny famindram-pahefana, ary dia nisaotra ireo rehetra mpiara-miasa taminy nandritra izay efa-taona niasana izay i Avotraina Andriamosa. (Jereo Sary Tohiny)
Voatendry ho Masoivohom-pirenena, misolon-tena maharitr’i Madagasikara eo anivon’ny UNESCO (Ambassadeur, Déléguée Permanente de Madagascar auprès de l’UNESCO) ao Paris – Frantsa i Yvette SYLLA, vady navelan’ny praiminisitra teo aloha sady efa filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha Jacques Sylla. Efa minisitry ny raharaham-bahiny i Yvette SYLLA, efa minisitry ny varotra ihany koa. Solontenan’ny filohan’ny Repoblika teo anivon’ny Filankevitra maharitry ny Frankôfônia. Farany teo, dia mpandrindra ankapobeny ny vaomiera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, nisahana ny fitsidihana masina nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Mpampianatra tantara eny amin’ny anjerimanontolo i Yvette SYLLA, ary filoha nasionalin’ny antoko « Madagasikara Mandroso ». (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 18 septembre 2019 12:24
Tetik'asa FANOA: Manara-maso ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana
Mijery akaiky amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana, ary ihany koa mijery ireo lesoka isan-karazany hanamorana ny fanisàna ny FANOA. Nambaran'ireo tompon'andraikitra ihany koa ny tokony hanaovana ny karapanondrom-pirenena ho biometrika mba ahafahana mandrafitra ny lisim-pifidianana. (Jereo Sary Tohiny)
Moana ny lalàna manoloana ireo solombavambahoaka mirotsaka hofidiana Ben’ny tanàna ka tsy voafidy, nefa mbola anatin’ny fe-potoana iasany. Ny hany ambaran’ny Lalampanorenana, ao amin’ny andininy faha-71, dia tsy azo ampirafesina amin’ny asam-panjakana, na olom-boafidy hafa ankoatra ny asa fampianarana ny maha solombavambahoaka. Azo atao didy fakan-tahaka anefa ny tranga tao Fianarantsoa tamin’ny 2015. Solombavambavambahoaka amperinasa voafidy tao Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania, avy amin’ny MAPAR, Razanamahasoa Christine, no narotsak’io vovonana politika io ho kandida Ben’ny tanànan’ny Kaominina ambonivohitr’i Fianarantsoa tamin’ny fifidianana natao ny 31 jolay 2015.
Misy kandida mpirotsaka fidiana ho Ben’ny tanàna avokoa ireo Kaominina miisa 1 695 manerana ny Nosy. 6129 ny isan’ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana voaray teny anivon’ireo OVEC (Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures) miisa 119. Kaominina roa ao anatin’ny Distrikan’Ambatondrazaka, dia Antsangasanga sy Amparihitsokatra, amin’ireo Kaominina miisa 1 695 manerana ny Nosy kosa no tsy nisy firotsahan-kofidiana ho mpanolontsain’ny tanàna voaray teny anivon’ny OVEC. Miisa 4 609 ireo antotan-taratasy firotsahan-kofidiana voaray, izay mitsinjara amin’ireo Kaominina 1 693.